एजेन्सी । निषेधित क्षेत्रको अवज्ञा गर्दै विरोध प्रदर्शन हरेको भन्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका २५ जना प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले गपक्राऊ गरेको छ।
मंगलबार दिउसो सिंहदरवारको दक्षिण गेट अगाडि मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले गरेको धर्ना र प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले कृष्ण पहाडी, कृष्ण कँडेल, डा. गंगाधर अधिकार,, उत्तम पुडासैनी, रेणुका पौडेल, बटुककृष्ण ढुंगेल लगायतलाई नियन्त्रणलाई लिएको हो । पक्राउ परेका उनीहरुलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा लगिएको छ ।
प्रदर्शनका क्रममा उनीहरु वर्तमान सरकार स्वतन्त्रता विरोधी र स्वेच्छाचारीभएको आरोप लगाएका थिए। विभिन्न नाराहरु लेखिएका ब्यानर र प्लेकार्ड सहित विरोधमा उत्रिएका शान्ति समाजका कार्यकर्ता प्रहरीले निषेधित क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन नगर्न भन्दै आग्रह गरेको थियो। तर, कुरालाई बेवास्ता गर्दै विरोध प्रदर्शनलाई जारी नै राखेपछि स्थिति केहि तनावपूर्ण बनेको थियो।
तर, यता समाजले भने शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्दै गर्दै पनि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको भन्ने आरोप लगाएका छन्।
प्रकाशित : मङ्गलबार, असार २६, २०७५१७:०७
डा. केसीको अनसन, ‘नेपालगञ्ज छोडेको जुत्ता बसपार्कका खोजेझैँ’
प्रचण्ड पत्नी सीता दाहाल आज उपचार गर्न नयाँ दिल्ली जाँदै, काेसँग जाँदैछिन् ?
डा केसीका १५ मध्ये ७ अनसन काँग्रेस नेतृत्वकै सरकारमा भएका हुन् त्यसैले पानी माथिको ओभनो बन्नुको अर्थ छैन
निर्यात बढाउन आयात प्रतिस्थापन – वाणिज्यमन्त्री यादव
प्रदेशसभाका लागि सांसदहरु धनगढी आउने क्रम जारी
अर्बौको ठेक्कामा भ्रष्टाचार गेरको प्रमाणित भएपछि पप्पु कन्ट्रक्सनका मालिकको सांसद पद चैट !